के हो ‘कोरोना कार्ड’?, विज्ञ भन्छन्- 'कोरोना प्रतिरोधी भएको पुष्टि भएको छैन'- समाचार - कान्तिपुर समाचार
के हो ‘कोरोना कार्ड’?, विज्ञ भन्छन्- 'कोरोना प्रतिरोधी भएको पुष्टि भएको छैन'
‘भूईं पुछ्न प्रयोग हुने क्लोरिन डाइअक्साइड प्रयोग गरिन्छ’
काठमाडौँ — अमेरिकाको फूड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन (एफडीए)द्वारा मान्यता दिइएको दाबी गरिएको ‘भाइरस ब्लकर डिसइन्फेक्सन कार्ड’ वास्तवमा एफडीएमा दर्ता नै नभएको देखिएको छ । त्यति मात्र नभई एफडीएलगायत विश्वका धेरै औषधि नियामक निकायहरुले यस्ता सामाग्रीहरुको प्रयोग नगर्न नै सुझाव दिइएको पाइएको छ ।
एफडीएले मार्च ८ मा एउटा सूचना नै प्रकाशित गरेर ‘क्लोरिन डाइअक्साइड’युक्त कुनै पनि सामाग्रीले कोभिड–१९ बाट जोगाउन सक्ने तथ्य हालसम्म कहिँकतैबाट पनि पुष्टि नभएको जनाएको देखिन्छ । साथै, त्यस प्रकारको दाबी गर्दै सामाग्रीको बिक्री वितरण गरे कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । यस्तै अमेरिकाको इन्भाएरोमेन्टल प्रोटेक्सन संस्थाले समेत यस प्रकारका समाग्रीले मानिसको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पार्ने भन्दै यसमाथि प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ ।
'कोरोना भगाउने कार्ड' भिरेर संसद र समिति बैठकमा सहभागी हुँदै सांसद !
नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरै राष्ट्रमा यस प्रकारको सामाग्रीको व्यापार अहिले ह्वात्तै बढेको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीद्वारा सम्प्रेसित समाचारमा उल्लेख छ । एक समाचारअनुसार रुसका राष्ट्रपतिका प्रवक्ता, बोलेभियाका अन्तरिम राष्ट्रपति, लेबनानी नेताहरुले समेत यस्ता सामाग्री प्रयोग गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
भाइरोलोजिस्ट तथा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताकी विशेषज्ञ डा. एरियन डेभिजनका अनुसार यस प्रकारको कुनै पनि सामाग्रीले कोरोना भाइरसबाट मानिसलाई जोगाउन सक्दैन । उनले हङकङ फ्री प्रेसलाई दिएको प्रतिक्रिया अनुसार यो सम्पूर्ण रुपमा ठगी धन्दा हो । ‘क्लोरिन डाइअक्साइड विशेष गरेर भूइँ पुछ्न प्रयोग गरिने डिस्इन्फेक्टेन्ट हो । यसलाई घाँटीमा झुण्ड्याएर कुनै पनि हालतमा भाइरसबाट सुरक्षित भइँदैन,’ उनले भनेकी छिन्, ‘यो सम्पूर्ण रुपमा गलत हो ।’
एसिया क्षेत्रमा भियतनाम र थाइल्याण्डले यस्ता सामाग्रीको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध नै लगाएको छ भने केही देशमा भने बिक्री वितरण भइरहेको छ ।
अमेरिकी संस्था एफडीएका अनुसार क्लोरिन डाइअक्साइडयुक्त सामाग्रीको असुरक्षित प्रयोगले मानिसको ज्यानैसम्म जाने खतरा रहन्छ । सो रसायनका कारण स्वासप्रस्वासमा गम्भिर समस्या आउनुका साथै मुटुको चालमा गडबडी, रक्तचापमा कमी, डिहाइड्रेसन (शरिरमा पानीको कमी), रगतमा क्षय, गम्भिर प्रकारको झाडाबान्ता समेत हुनसक्छ ।
प्रकाशित : असार १२, २०७७ २१:१९
अमेरिकामा एकै दिन ४० हजार संक्रमित
– २ करोड संक्रमित भइसकेका अनुमान
– अक्टोबरसम्म १ लाख ८० हजारको मृत्यु हुने दाबी
असार १२, २०७७ एजेन्सी
वासिङ्टन — अमेरिकामा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट एकै दिन ४० हजार संक्रमित भएका छन् । रोग नियन्त्रण केन्द्र (सीडीसी) ले संक्रमितको वास्तविक संख्या अहिले पुष्टि गरिएको भन्दा १० गुणा बढी रहेको अनुमान गरेको हो ।
कोरोना भाइरसबारे विश्वव्यापी तथ्यांक संकलन गरिरहेको जोन हप्किन्स विश्वविद्यायका अनुसार यसअघि अप्रिल २४ का दिन ३६ हजार ४ सय जना संक्रमित भएका थिए । संक्रमण तीव्र भएपछि केही राज्यले व्यापार व्यवसाय सुचारु गर्ने योजनापछि सारेका जनाइएको छ ।
सबै व्यवसाय सुचारु गर्ने जनाएको टेक्सास राज्यले आफ्नो योजना स्थगित गरेको जनाएको छ । गभर्नर ग्रेग अबोटले अस्थायी रूपमा राज्य खुला गर्ने निर्णय स्थगित गरिएको जनाएका छन् । टेक्सास राज्यमा बिहीबार एकै दिन ५ हजार ९ सय ९६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । टेक्सासमा बिहीबारमात्रै ४७ जनाले भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन् ।
कोभिड–१९ का कारण अमेरिका विश्वमै सबैभन्दा प्रभावित भएको छ ।
शुक्रबार साँझसम्म अमेरिकामा २४ लाख २४ हजार ५४ जना भाइरसबाट संक्रमित भइसकेका छन् । भाइरसका कारण १ लाख २४ हजार ४ सय ६८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
सीडीसी प्रमुख डा. रोबर्ट रेडफिल्डका अनुसार पछिल्लो समय देशका दक्षिणी र पश्चिमी राज्यहरूमा संक्रमितको संख्या निकै बढेको छ । यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेका वासिङ्टन विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरुले आगामी अक्टोबर महिनासम्ममा १ लाख ८० हजारको मृत्यु हुने अनुमान गरेका छन् ।
उनीहरुले ९५ प्रतिशत अमेरिकीहरूले मास्क लगाएमा त्यो सख्या १ लाख ४६ हजारमा सीमित हुने अनुमान पनि गरेका छन् । सीडीसी प्रमुख रेडफिल्डले हाल संक्रमित भएकाहरु प्रत्येकबाट कम्तीमा १० जनामा संक्रमण फैलिएको देखिएको जनाएका छन् ।
अहिलेसम्म लक्षण देखिएका र चासो देखाएकाहरुलाई मात्रै कोरोना परीक्षण गर्ने गरिएकाले संक्रमितको संख्या अहिले सार्वजनिक भएको भन्दा दस गुण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । यसका आधारमा अमेरिकाको जम्मा जनसंख्याको ५ देखि ८ प्रतिशतलाई भाइरसले असर गरिसकेको देखिएको छ ।
संक्रमणको क्रम तीव्र गतिमै रहेकाले सामाजिक दूरी कायम राख्ने, मास्क, पन्जा र स्यानीटाइजर लगाउने, हात धुनेलगायतका आधारभूत स्वास्थ्य सतर्कताका कार्यहरु गर्न स्वास्थ्य अधिकारीहरुले आह्वान गरेका छन् । पछिल्लो समयमा हेलचेक्रयाइँ पनि बढ्दै गएकाले मानवीय क्षति अझ धेरै हुन सक्ने उनीहरुको चिन्ता छ ।
प्रकाशित : असार १२, २०७७ २०:३९